“Friend …. သူငယ်ချင်း” CD တေးအယ်လ်သစ်မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ | Latest Channel
Home Entertainment Music “Friend …. သူငယ်ချင်း” CD တေးအယ်လ်သစ်မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
ဂေဂေး၊ ပိုးမီ၊ မင်းရတုပိုင်၊ မေမဒီ၊ ဖြူဖွေး တို့ ပါဝင်သီဆိုထားတဲ့ “Friend …. သူငယ်ချင်း” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ group audio CD တေးအယ်လ်ဘမ်သစ် စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့၊ အနော်ရထာလမ်းနဲ့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းထောင့်က Orchid ဟိုတယ်မှာ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဒီ group audio CD တေးအယ်လ်ဘမ်ကို လာမယ့်စနေနေ့ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်မှာ စတင်ဖြန့်ချိမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီ တေးအယ်လ်ဘမ်သစ်မှာ ပါဝင်သီဆိုထားသူတွေဟာ မြန်မာအိုင်ဒေါအစီအစဉ်နဲ့အတူ ပရိသတ်နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား အဆိုတော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ Promotion အတွက် နေ့ရက် အချိန်နဲ့ နေရာတို့ကို ထပ်မံကြေညာမယ်လို့ သိရပြီး မုံရွာမြို့ Promotion အတွက်ကတော့ လာမယ့်စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်၊ သောကြာနေ့ ညနေ ၄ နာရီကနေ ညနေ ၇ နာရီအထိ မုံရွာ၊ ကျောက်ကာလမ်း Mobile 1 ဖုန်းဆိုင်ရှေ့မှာ ပါဝင်သီဆိုထားတဲ့ သူငယ်ချင်း ၅ယောက် တို့ကနေ အမှတ်တရတွေ့ဆုံ သီဆိုဖျော်ဖြေ လက်မှတ်ထိုးပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ Promotion ကတော့ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်၊ စနေနေ့ ညနေ ၄နာရီမှ ၇ နာရီထိ ၆၂x၆၃ကြား ၃၅လမ်းပေါ်က Amazing Mall မှာ အဲဒီသူငယ်ချင်း၅ယောက်အပြင် ဝေထွန်း ၊ မေနွယ်ထွန်း တို့ကနေ ပရိသတ်နဲ့ အမှတ်တရတွေ့ဆုံဖျော်ဖြေပေးပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးပေးမှာပါ။
Previous articleရန်ကုန်ဝန်းကျင်၌ ခေတ်မီ မြို့သစ်စီမံကိန်း ထူထောင်မည်
G Latt ရဲ့ “ဒီဇင်ဘာရေဒီယို” Audio CD သစ်ထွက်ရှိလာ
အဓိပတိလမ်းက ရင်ခုန်သံဂီတညချမ်း” မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ